BASIC GERMAN KOSESI
KUPEDZISIRA - YAKADZIDZISWA GERMAN KOSESI
NGUVA DZEJEREMERI NEZVITONGO
GERMAN DZIMWE DZIDZISO
Muchidzidzo cheChirungu ichi, tichaona Chirungu Mwedzi hurukuro. Tichanyora zviitwa pamusoro pemwedzi muChirungu uye muenzaniso mitsara pamusoro pemwedzi muChirungu. Chidzidzo chemwedzi muChirungu chinowanzo dzidziswa mumagiredhi e9 muzvikoro zvedu zvepamusoro.
SHANDURA WANA MARI
Manyorero uye Kududza Mwedzi muChirungu
Chirungu Kana iwe watanga kudzidza, chimwe chezvinhu zvekutanga chauchadzidza chinofanira kunge chiri mwedzi. Nekuti, isu tinofanirwa kutaura kuti chiyero chenguva chauchashandisa zvakanyanya muhupenyu hwebhizinesi uye hupenyu hwezuva nezuva mwedzi. Tinofanira kutaura kuti hapana musiyano mukuru pakati pokuziva nomusoro mwedzi nokuziva nomusoro mazuva. Panguva iyi, dzidza mwedzi muchirungu Iwe unogona kugadzira nzira dzekudzidza dzinoshanda kwauri. Tinofanira kutaura kuti kana ukagadzira makadhi anoshanda, uchadzidza mwedzi munguva pfupi zvikuru. Nokuziva makadhi aya nomusoro Mwedzi yechirungu Iwe uchadzidza munguva shoma kupfuura iwe unofunga. Mushure mekudzidza mwedzi, unofanira kuedza kuvandudza unyanzvi hwako hwekunyora. Ndosaka uchifanira kuisa mwedzi wega wega mumutsara. Ungada kutarisa sei mwedzi yeChirungu pamwe chete?
Ocak: January, mwedzi wokutanga wegore; Pakanyorwa kuti “Ndira” muchirungu. Mataurirwo awo ndeekuti ce-nu-e-ri.
Kukadzi: February, mwedzi wechipiri wegore; muchirungu"Kukadziinozivikanwa se“. Kana iwe uchinetseka kuti tingadudze sei Kukadzi, tinofanira kuti ndifeb-ru-e-ri.
Mart: Kurume, kunova kutanga kwechirimo; Inozivikanwa se "March" muChirungu. Tinofanira kutaura kuti inoimbwa muna Kurume.
Nisani: Kubvumbi, mwedzi wechina wegore, iri muChirungu se“KubvumbiKwakanyorwa kuti “. Inonzi Eyp-rıl.
Chivabvu: May mwedzi wechishanu wegore; Pakanyorwa kuti "May" muchirungu. Tinofanira kutaura kuti inoverengwa sebheri.
Haziran: June, mumwe wemwedzi inopisa kwazvo pagore; muchirungu Chikumi zvakanyorwa kuti Tinofanira kutaura kuti rinodudzwa semano.
Temmuz: July yakanyorwa sa“Chikunguru”; Inonzi zvakare cu-lay.
Nyamavhuvhu: Nyamavhuvhu, mwedzi wechisere wegore; “NyamavhuvhuKwakanyorwa kuti “. Tinofanirawo kutaura kuti inoverengwa seO-gust.
Eylül: September, kunova kutanga kwematsutso; muchirungu Gunyana zvakanyorwa kuti Zviri nyore kwazvo kuverenga! Unogona kuzvitaura sep-tem-bir.
Gumiguru: Gumiguru, wechipiri kusvika kumwedzi wekupedzisira wegore; Tinofanira kuti kunyange chakanyorwa kuti Gumiguru muchirungu, chinodaidzwa kuti ok-to-bir.
Mbudzi: November, rakanyorwa saNovember; Iri kutaurwa se no-vem-bir ku English.
Zvita: Kana December ari mwedzi wekupedzisira wegore, Zvita Inonzi di-sem-bir.
Zvino, kana uchida, ngationei mwedzi yeChirungu uye mataurirwo emwedzi yeChirungu pamwechete sechinyorwa:
Chirungu Mwedzi uye Turkish Zvinoreva
Kurume (Kurume) :Kurume
Kubvumbi (Kubvumbi) :Kubvumbi
Nyamavhuvhu (Aug): Nyamavhuvhu
Gumiguru (Oct) :Gumiguru
Mwedzi yeChirungu uye Mataurirwo eTurkey
March (March): March
Kubvumbi (Kubvumbi): Ep-rıl
Chivabvu (Chivabvu): Mey
June (Chikumi): Jun
Nyamavhuvhu (Nyamavhuvhu): Ou-gist
Mwedzi yechirungu Tichatsanangura nemuenzaniso mitsara kuti iwe udzidze zvirinani!
Muenzaniso Mitsara yeMwedzi muChirungu
Ndira mwedzi wekutanga wegore. (Ndira mwedzi wekutanga wegore.)
Mukoma wangu akaberekwa muna February. (Hanzvadzi yangu yakazvarwa munaFebruary.)
Isu tanga tiri mu quarantine kubva munaKurume
Kubvumbi kwakakosha nekuda kwekuuya kwechirimo
Ndiri kuronga kuenda kuna ambuya vangu muna Chivabvu 2021
Zuva rangu rekuzvarwa ndi10 Chikumi! (Chikumi 10 izuva rangu rekuzvarwa!)
Handikwanise kubva muguta kusvika Chikunguru
Nyamavhuvhu ndiwo mwedzi unopisa kwazvo pagore.
Zvikoro zvinotanga munaGunyana
Baba vangu vakavhiyiwa muna October
Ndichashanyira amai vangu muna Mbudzi
Zvita ndiwo mwedzi wekupedzisira wegore
Nekuda kweizvozvo, Mwedzi yechirungu Kuti udzidze zvirinani, unofanirwa kutarisisa kuvashandisa mumitsara. Zvichava nyore kudzidza kana ukashandura mwedzi inoenderana nemazuva akanyanya kukosha kwauri kuChiRungu woramba uchifunga nezvawo. Kunze kweizvozvo, iwe unogona zvakare kuchengeta mwedzi gumi nemiviri yegore mupfungwa nekuzvitaura senhetembo dzevana.
Maitiro ekudzidza Chirungu Mwedzi zviri nyore?
Nguva nemisi zvakakosha zvikuru mukukurukurirana kwezuva nezuva. Paunenge uchitaura kana kunyora kune mumwe munhu neChirungu, unofanirwa kuziva nguva nemazuva. Mukati memusangano, zvichave zvakakodzera kududza nguva yauchasangana nomunhu upi noupi, kana kuti mumamiriro ezvinhu apo kunenge kuri madikanwa kududza misi ipi neipi, kupfurikidza nokududza mwedzi. Panguva ino, zvakakosha kuti udzidze mwedzi yeChirungu nenzira iri nyore. Sezvatataura pamusoro, inoshanda Mwedzi yeChirungu Zvichave zvakakosha kugadzirira makadhi. Kana iwe ukaverenga uye nemusoro mwedzi iri pakadhi rega rega, unenge wazadzisa chinangwa chako. Kushanda nenzira iyi kuchave kunonakidza uye kunobudirira kwauri.
Chirungu Mushure mekuziva nemusoro mwedzi, iwe unofanirwa kutanga kunyora mitsara yako kuitira kusimbisa maitiro avo ekunyora. Unogona kudzidza Chirungu mwedzi nekukasira uchishandisa mitsara yakaita seiyo iri pamusoro. Zvichava nyore kwazvo kwauri kuti udzidze mwedzi, kunyanya kana iwe ukabata nemusoro uye kunyora mwedzi yemazuva akadai semazuva ekuzvarwa uye emhemberero dzemuchato izvo zvakakosha kwauri. Mwedzi yeChirungu subject; Hapana mubvunzo kuti ndicho chidzidzo chakareruka uye chinonakidza muChirungu. Kuti unzwisise zviri nani chidzidzo ichi, unogona zvakare kuedza kudzidza nekupatsanura mwedzi mumapoka. Tinogona kutaura kuti kana iwe ukakamura mwedzi yezhizha, yechando, yechirimo uye yekuvhuvhuta kuita mapoka uye kudzidza, ivo vanozogara zvachose mupfungwa dzako.
dzidza mwedzi muchirungu Pasinei nezera rako, unofanira kuedza nzira dzekudzidza dzinofadza vana. Panguva ino, kana ukachinja nziyo dzinonakidza, dzine mutinhimira, dzinobata uye dzinonamira parurimi rwako zviri nyore, uchaona kuti unodzidzira sei chidzidzo ichi nekukurumidza. Kudzidza mwedzi muChirungu Zvinonyanya kukosha kugadzirisa mitsara yemuenzaniso panguva Zvisinei, ruzivo runoshanda rwakakosha seruzivo rwedzidziso. Tinofanira kutaura kuti kana ukasadzidzira, uchakurumidza kukanganwa ruzivo rwose rwawakadzidza. Uye zvakare, Kudzidza mwedzi muChirungu Iwe unofanirwawo kuterera kune zvinotevera pfungwa!
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kutarisisa kune chokwadi chekuti iwo ekutanga anofanirwa kugara aine capitalized kana uchinyora mwedzi muChirungu. Mukuwedzera, haufaniri kushandisa mazwi akazara pakunyora mwedzi. Mune mamwe mazwi, iwe unogona zvakare kushandisa mamwe mapfupi. Semuenzaniso: Unogona kupfupisa Jun pachinzvimbo chaJune, Zvita pachinzvimbo chaZvita.
pfupiso yemwedzi muchirungu Iwe unofanirwa kubhadhara kune imwe nyaya panguva yekuita. Nekuti, muAmerican English, zvipfupiso zvinoiswa pakupera kwenguva. Nekudaro, hazvigoneke kuisa nguva pamagumo ezvipfupiso muBritish English.
Chivabvu, Chikumi, Chikunguru; iva neakaenzana echiRungu saMay, June, Chikunguru, zvichiteerana. Kunyangwe zvichinzi hapana zvipfupiso, kunyanya kunzvimbo dzekunze, kune mashandisirwo akadai saJun pachinzvimbo chaChikumi. Tinofanira kutaura kuti hapana kupfupikiswa kwakadaro kwaMay naChikunguru.
Chirungu Mwedzi Maekisesaizi
1st mwedzi waNdira
2nd mwedzi Zvita
3rd mwedzi June
Mwedzi 4 May
Mwedzi wechi5 Kukadzi
6 mwedzi waKurume
7 mwedzi waNovember
8 mwedzi waApril
9 mwedzi waGumiguru
10 mwedzi waChikunguru
Mwedzi wechi11 Nyamavhuvhu
12 mwedzi waSeptember
Zadza muBlanks Exercise
Ndira, Kukadzi, …….
Mwedzi unotevera uchava Kurume. Mune mamwe mazwi, mune void Kurume anofanira kuuya.
Kurume, Kubvumbi, ……..
Mwedzi unotevera uchava May. Mune mamwe mazwi, mune void Chivabvu ndichauya.
Kubvumbi, Chivabvu, ……
Mwedzi unotevera uchava June. Nemamwe manzwi, kupinda pasina Chikumi anofanira kuuya.
Chivabvu, Chikumi, …….
Mwedzi unotevera unofanira kuva July. Mune mamwe mazwi, mune void Chikunguru anofanira kuuya.
Mwedzi unotevera unofanira kuva August. musisina chinhu Nyamavhuvhu anofanira kuuya.
Chikunguru, Nyamavhuvhu, …..
Mwedzi unotevera unofanira kuva September. musisina chinhu Gunyana anofanira kuuya.
Mwedzi unotevera unofanira kunge uri Gumiguru. musisina chinhu Gumiguru anofanira kuuya.
Mwedzi unotevera unofanira kuva November. musisina chinhu Mbudzi anofanira kuuya.
Mwedzi unotevera unofanira kunge uri Zvita. musisina chinhu Zvita anofanira kuuya.
Dzidzira Kufungidzira Mwedzi muChirungu
Ndiwo mwedzi wekutanga wegore. Zvinotora mazuva makumi matatu nerimwe.
Mhinduro chaiyo inofanira kuva Ndira. Nemamwe mashoko, Ndira!
Mwedzi uno, une mazuva makumi maviri nemapfumbamwe pamakore mana oga oga, ndiwo mwedzi wechipiri wegore.
Mhinduro chaiyo inofanira kuva February. Kukadzi tinogona kuti!
Mwedzi uno, unofananidzira kusvika kwechirimo; Inozivikanwa zvakare nekutonhora kwayo.
Mhinduro chaiyo inofanira kuva March. Nemamwe mashoko, Kurume!
Zuva reKutonga neVana rinocherechedzwa mumwedzi uno, uyo unozivikanwa nekutumbuka kwemaruva uye shiri dzinorira.
Mhinduro yakarurama inofanira kuva April. Kubvumbi Tinofanira kupindura.
Mwedzi uno, mwedzi wezhizha usati wasvika; Zvinotora mazuva makumi matatu nerimwe.
Mhinduro chaiyo ndiMay. Chivabvu zvinofanira kuva.
Mumwedzi uno, unova mwedzi wekutanga wemwaka wechirimo, zvikoro zvinopindawo muzororo rechirimo.
Mhinduro chaiyo ndiChikumi. Chikumi inofanira kunyorwa se
Mumwedzi uno, une mazuva makumi matatu nerimwe, kupisa kwakanyanya kunoonekwa. Mwedzi wechipiri wechirimo.
Mhinduro chaiyo inofanira kuva Chikunguru. Chikunguru inofanira kunyorwa se
Mumwedzi uno, unozivisa kusvika kwematsutso, miti inotanga kubuda mashizha.
Mwedzi uno, sezvaungafungidzira, ndiGunyana. Gunyana inofanira kunyorwa se
Ndiwo mwedzi wekupedzisira wegore. Zvinotora mazuva makumi matatu nerimwe.
Kunyangwe mwedzi wekupedzisira wegore ndiDecember Zvita inofanira kunyorwa se
Ndiwo mwedzi wekupedzisira wemwaka wezhizha. Nekuda kwekupisa, tinoenda kugungwa.
Mwedzi uno ndiNyamavhuvhu. Nyamavhuvhu inofanira kunyorwa se
Mwedzi uno, umo mamiriro okunze anotanga kutonhora zvishoma nezvishoma, ndiwo mwedzi wechipiri wemwaka wekuvhuvhuta.
Sezvaunogona kufungidzira, tiri kutaura pamusoro paOctober. Gumiguru zvakanyorwa kuti.
Kunyange zvazvo uri mwedzi wokupedzisira wegore, mvura inonaya zvikuru inoonekwa.
Sezvaungafungidzira, mwedzi uno ndiNovember. Mbudzi zvakanyorwa kuti.
Ndeupi Mwedzi Unofambirana NeMwedzi Upi Wegore Wekuita Maekisesaizi
Zvita ndiwo …… mwedzi wegore.
Chikunguru ndiwo …… mwedzi wegore.
Ndira ndiwo ….. mwedzi wegore.
Gumiguru ndiwo ….. mwedzi wegore.
Kurume ndiwo …… mwedzi wegore.
Kubvumbi ndiwo … mwedzi wegore.
Gunyana ndiwo ….. mwedzi wegore.
Kukadzi ndiwo ….. mwedzi wegore.
June ndiye…. mwedzi wegore.
May ndiye…. mwedzi wegore.
Nyamavhuvhu ndiye…. mwedzi wegore.
Mbudzi ndiwo ….. mwedzi wegore.
Unogona kuwana mhinduro dzechokwadi pazasi:
Unofanira kuedza kupindura zviitwa zvinotevera nemazvo.
…..ndiye mwedzi mupfupi (mhinduro chaiyo: Kukadzi)
Pane …. mwedzi pagore. (mhinduro yakarurama: 12)
…… mwedzi yezhizha (mhinduro chaiyo: Chikumi, Chikunguru, Nyamavhuvhu)
Mwedzi wekupedzisira wegore …… (mhinduro chaiyo: Zvita)
Mwedzi wekutanga mumatsutso ndi….. (mhinduro chaiyo: september)
Nyamavhuvhu ndiwo ….. mwedzi wegore. (mhinduro yakarurama: 8th)
Zuva reValentine rave mu ..... (mhinduro chaiyo: Kukadzi)
Nzira yekunyora Chirungu?
dzidza chirungu mwedzi nekukurumidza sezvinobvira Kana uchida, unofanira kuyeuka. Panguva ino, kubata Chirungu nemusoro kuri nyore kupfuura zvaunofunga! Chete mwedzi yekudzidza muchirungu Zvinotevera zvinokurudzira zvichave zvakakosha kwauri, kwete chete pakudzidza mutauro, asiwo pakudzidza mutauro.
nomusoro chirungu Unofanira kuverenga zvakawanda kana uchida. Kana iwe ukaverenga zviwanikwa zveChirungu zvaunowana, mazwi ako anovandudza. Kana uchinetseka nemusoro mazwi echiRungu, unofanira kuedza kuverenga chero chinyorwa chaunogona kuisa maoko ako, ringave bhuku, bepanhau kana magazini. Paunenge uchiverenga zviwanikwa zvakadaro, unosangana nemazwi matsva usingazvizive. Mukuwedzera, iwe unozobata nemusoro mazwi aunoziva. Pamusoro pezvo, nekudzidza zvinoreva mazwi asina kujairika kubva muduramazwi, unovandudzawo mazwi ako.
izwi rechirungu Paunenge uchiyeuka, unofanira kungwarira pakusarudza mashoko. Mune mamwe mazwi, unofanira kutanga wadzidza mazwi anonyanya kufadza kwauri. Iwe unogona zvakare kushandisa nzira iyi uchidzidza Chirungu mwedzi. Somuenzaniso, unogona kudzidza mwedzi yapfuura, kududzirwa kwaunoda. Kunze kwezvo, mwedzi une zuva rako rekuzvarwa kana Zuva reValentine richave rinoshamisa semwedzi uri nyore kwauri kuti udzidze.
rangarira mazwi echirungu zvisinei nekuti chiito chakakosha sei, chinonyanya kukosha kushandisa mazwi awakadzidza. Kuti usakanganwa uye kusimbisa mazwi echiRungu awakambobata nemusoro, unofanirwa kugara uchiedza kuashandisa mumitsara. Panguva ino, iwe unofanirwa kunyora mwedzi yeChirungu yawakadzidza uye woishandisa mumutsara. Kana kushanda kwehuropi kunoongororwa, zvakakosha kubata nemusoro izwi rakadzidzwa kuti uriyeuke. Kuti utore mumusoro, zvinodikanwa kushandisa izwi riri mubvunzo.
Iwe unofanirwa kungwarira kutora manotsi uchiyeuka mwedzi muChirungu. Iwe unofanirwa kuzadza nzvimbo yako yebasa, kamuri, komputa, dhesiki ine post-iyo manotsi. Kutenda kune manotsi anonamira, iwe unozopinda mutsika yekudzidza mazwi nekukurumidza sezvinobvira. Paunopedza nguva uri munzvimbo yako yebasa, maziso ako achaenda nekusaziva kune zvinyorwa zvawatora. Nenzira iyi, nekusaziva mwedzi yekudzidza muchirungu uye iwe uchave nemukana wekuziva nemusoro.
Paunenge uchidzidza mwedzi yeChirungu, sezvatataura pamusoro, iwe unofanirwa kuedza kuita kuti basa iri rifadze. Kana iwe ukaedza kubata nemusoro muchimiro chenhetembo, iwe uchave iwe unobatsirwa nebasa iri. Kunze kwezvo, iwe unofanirwa kutamba mitambo yakawanda. Chirungu Pane nharembozha dzinokutendera kuti udzidze. Nezvishandiso izvi, unogona kuita kuti zvive nyore kudzidza mwedzi yeChirungu nekutamba mitambo uye kuita maekisesaizi mukati mezuva.
Chirungu, mutauro unotaurwa nemamiriyoni evanhu kubva kuEurope kusvika kumativi ari kure eAsia neAfrica; ine nzvimbo inokosha muupenyu hwedu. Mumazuva ano kana tave kuma 2020s, munhu anenge apedza chikoro haatauri Chirungu mukubvunzurudzwa kwebasa; zvinoreva kuti haana mukana kune vamwe vanokwikwidza. Kunze kwezvo, Chirungu; Zvinotorawo basa rinoshanda muhupenyu hwedu hwedzidzo nema90s. Kutenda kuzvikoro zvepamusoro zveAnatolian, vanhu vazhinji muTurkey kudzidza chirungu ndawana mukana. Uyezve, nhasi kudzidza chirungu zera radzika kusvika padanho rekireshi. Teki; Inotarisira kuve imwe yenyika dzinotungamira muEurope mudzidzo yeChirungu.
Zvinoenderana nezvinangwa zveEuropean Union zvenyika yedu, tinogona kutaura kuti dzidzo yemitauro yekunze, kunyanya Chirungu, yakakosha. Muma1990 nehafu yekutanga ye2000s Chirungu Zvidzidzo zvechiRungu, izvo zvanga zvisina mudzidzisi nekuda kwekushaya mudzidzisi, zvave zvidzidzo zvinopedzerwa nevadzidzi pamwe nekudzidza zvakawanda. Dzidzo yeChirungu inotungamirwa mune zvakasiyana, kunyanya mugirama uye mazwi. Vadzidzi vanopihwawo mukana wekuzvivandudza pakuverenga, kutaura, kunyora nekuteerera. Nemamwe manzwi, vadzidzi havapasa zvidzidzo izvi nekungodzidza zvinyaka (zvinyaka eg nguva yapfuura) kana nemusoro mazwi mashoma. Nekuda kwemabasa epurojekiti, vane mukana wekudzidza Chirungu zvirinani nekutaura, kunyora rondedzero, kuteerera kuverenga ndima nenhaurirano, nekuverenga nekutsikisa ndima dzekuverenga.
Chirungu Tinofanira kutaura kuti tekinoroji chinhu chakakosha zvakare mudzidzo. Iwe ungafarira kuti vadzidzisi veChirungu mumakore apfuura; Aifanira kuita kuti vadzidzi vake vateerere kuburikidza nematepi kubva pamatepi. Nekudaro, nekuda kwekuvandudza tekinoroji, sarudzo dzakanakisa dzinoshandiswa mudzidzo yeChirungu. Nekuda kweizvozvo, tinogona kuti Chirungu chevadzidzi chave padanho repamusoro kana tichienzanisa nemakore apfuura. Kana iwe ukatsvaga pfupi paYouTube, vana vezera rechikoro chepakati vachiri Chirungu Iwe uchaona kuti vanopfura mavhidhiyo uye vanotaura nechirevo.
Sei Chirungu Chakakosha?
Chirungu Kana zvichinzi, haufanire kufunga kuti mutauro unotaurwa munyika zhinji dzepasi. Nokuti, mutauro uyu; Ndiwo zvakare mutauro unonyanya kushandiswa munyika. Naizvozvo, kana iwe uchifunga kuti kudzidza Chirungu hakuna basa, iwe unofanirwa kufunga nezve aya mazano. Chirungu chakanaka Iwe unofanirwa kurangarira kuti kana ukataura, hupenyu hwako huchava nani kuumbwa. Zvizhinji zvesarudzo zvakakumirira iwe maererano nezvese zvedzidzo uye basa. Kunze kwezvo, haufanirwe kungotarisa kudzidza Chirungu semukana wedzidzo kana webasa. Mutauro waunogona kuwedzera zvakawanda kwauri maererano netsika uye varaidzo. Muimbi wako waunofarira Chirungu Kuteerera rwiyo rwakanyorwa neChirungu nekunzwisisa kunoita kuti unzwe zvakanaka. Mukuwedzera, iwe uchave nemukana wekutaurirana nevanhu vanobva kumativi ese enyika muChirungu. Nemamwe mashoko, hauzombofi wakanzwa uri wega.
Chirungu; Mutauro wakakosha kune zvese zvinangwa zvako zvehunyanzvi uye zvemunhu. Kana uchangotanga kudzidza Chirungu, une zvikonzero zvakawanda zvekuenderera mberi.
Chirungu Iwe unofanirwa kuziva kuti zvisinei nebasa raunobata naro, mikana mitsva ichauya nenzira yako muhupenyu hwako. Munyika yekudyidzana kwepasi rose, makambani mazhinji anopinda mukudyidzana nenyika dziri munzvimbo dzakasiyana dzepasi. Panguva ino, vashandi vanogona kutaurirana nevasingazivi vanodiwa. Neruzivo rwako rweChirungu, unogona kuwana basa idzva kana kuve nemukana wekusimudzirwa mukati meiyo institution yawakashandira. Mukuwedzera, tinogona kutaura kuti nzvimbo dzakasiyana dzakadai sekushandura uye muturikiri, vashandi vekutengesa kana mudzidzisi wemutauro vakakumirira.
TOEFL; Pasina mubvunzo, ibvunzo iyo vechidiki vazhinji veTurkey vanoda kuwana zvibodzwa zvepamusoro. Nekudaro, Chirungu chako chinofanira kunge chakanyatso kukwira kumusoro pabvunzo iyi. Iine yakanaka TOEFL mamakisi, unogona kunyoresa muzvikoro chero kupi zvako pasirese. Iwe unofanirwawo kuvandudza Chirungu chako kuti upfuure IELTS uye Cambridge bvunzo.
Chirungu Kukwanisa kurava nokunzwisisa zvirokwazvo ibetsero huru! Tinogona kutaura kuti vanhu vanosvika bhiriyoni pasi rose vanonyorerana neChirungu paInternet. Panguva ino, nevanhu vari munzvimbo dzakasiyana dzepasi, Chirungu Zvichava zvinonakidza kutaura. Hazvingave zvinonakidza here kutumira mameseji kubva kuNigeria neChirungu? Pamusoro pezvo, nekuda kweruzivo rwako rweChirungu, unogona kuwana mukana wekuverenga nekunzwisisa kwakasiyana masosi painternet.
Kusvika pari zvino, tataura pamusoro peropafadzo dzakapiwa neChirungu maererano nedzidzo uye zvebhizimisi. Nekudaro, iwe unogona zvakare kuwana zvakawanda maererano netsika uye varaidzo kana ukadzidza mutauro uyu. Kunyanya paCNBC-E, imwe yenzira dzakakurumbira dzeTV dze2000s. English series Uye isu tese taida kuziva Chirungu chakakwana kuti titarise mafirimu pasina zvinyorwa zvidiki. Kunyangwe pasina CNBC-E nhasi, iri padanho rakanaka rekuona nhepfenyuro dzekunze paNetflix kana chikuva chakasiyana chisina zvinyorwa zvidiki. Chirungu Zvakakosha kuti uzive.
Pakupedzisira, Chirungu Tinofanira kutaura pamusoro pezvakanakira kudzidza mukukura kweuropi. Maererano nezvidzidzo zvedzidzo yemutauro, zvakatemwa kuti mutauro mutsva unoshandura chimiro cheuropi. Iwe uchashamisika iwe paunodzidza zvakanakira iyi mamiriro, ayo anokanganisa chikamu chehuropi chine mutoro wekuyeuka uye pfungwa yekuziva! Mune mamwe mazwi, nzira yaunofunga ichachinja kana ukadzidza mutauro mutsva. Sezvo huropi hwako huchiwedzera kusimba, iwe unowana kugona kufunga-multi-dimensional.
Somugumisiro, funga iwe pachako nokukurumidza sezvinobvira, uchifunga nezvezvinhu zvose zviri pamusoro apa. dzidza mwedzi muchirungu Unofanira kuzvikurudzira!
YEDU SHONA SHANDURO YEDUDZIKO YATANGA. ZVIMWE ZVAKAITIKA: Shanduro yeChirungu
# Manyorero uye Kududza Mwedzi muChirungu
# Chirungu Mwedzi uye Turkish Zvinoreva
# Mwedzi yeChirungu uye Mataurirwo eTurkey
# Muenzaniso Mitsara yeMwedzi muChirungu
# Maitiro ekudzidza Chirungu Mwedzi zviri nyore?
# Chirungu Mwedzi Maekisesaizi
# Zadza muBlanks Exercise
# Dzidzira Kufungidzira Mwedzi muChirungu
# Ndeupi Mwedzi Unofambirana NeMwedzi Upi Wegore Wekuita Maekisesaizi
# Nzira yekunyora Chirungu?
# Sei Chirungu Chakakosha?
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa anenge masvondo mana apfuura, munaNovember 4, 06, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa munaNovember 2021, 6.
Ndakusarudzira chinyorwa chisina kujairika, inotevera ndiyo misoro yemhanza yako. Nderipi raungada kuverenga?
Mutauro weGermany Mutauro Dzidza ChiGerman 5
Nyika dzeChirungu neNyika
Kuzvizivisa -Kutangisa Mitemo muChirungu
Mhuri Yedu muChirungu, Nhengo dzeMhuri muChirungu, Kuunza Mhuri muChirungu
Dzidza Zvidzidzo zveGerman Dzidza German 3
Mutauro weGermany Mutauro Dzidza ChiGerman 7
Kwaziso nekuonekana muChirungu
Tags: 10 kirasi Chirungu mwedzi, 9 kirasi Chirungu mwedzi, mwedzi muchirungu
Kuzvizivisa pachedu muchiGerman
Chikoro cheGermany Chikoro
ChiGerman Chimiro Chakanotaura
Chikafu cheGerman uye Zvinwiwa
Maawa German (kufa uhrzeit), Hours German vanoti, Wie mate IST kes?
Nhamba dzeGerman (Die Zahlen)
Mazuva eGermany, Mazuva eGermany evhiki (Wochentage)
Das Deutsche Alphabet, Tsamba dzeGerman
Mwedzi yeGermany nemwaka weGermany
Muenzaniso mitsara pamusoro pehunyanzvi nehunyanzvi muChirungu
Muenzaniso mitsara pamusoro peChirungu Colors uye Chirungu mavara
Nhamba dzeGerman dzinosvika ku100
Nhamba dzeGerman dzinosvika makumi maviri
Chii chinonzi Avhareji Muhoro muGermany
Chii chinoreva mangwanani akanaka muchiGerman, kuti ungati sei mangwanani muchiGerman
Nzira yekutaura sei kuti ndinokudai muchiGerman
Iwe unorevei muchiGerman?
Ungataura sei kuti ndinokutendai muchiGerman
Yedu Yakavanzika Policy
ChiGerman Kudzidza App
Zvemagariro Nhau Nhau
Mitambo yeGerman, Zvirongwa uye maFaira
Pakati pepakati - Advanced German Courses
Saiti yekudzidza chiGerman
Kuzvidzidzira-kudzidza ChiGerman Bhuku
10th Giredhi ChiGerman Bhuku Rinobatsira
9th Giredhi Yakawedzera yeGerman Kosi Bhuku
Zvepamusoro Zvinonakidza WhatsApp Meseji
German Teachers German Education Set
Izvi zvakagadzirirwa hazviiti
Mutambo wokukunda wechiGerman Quiz
Chirongwa cheGerman Chigadzi
Dzidzo Yedu yeGermany Yakaiswa
Coyright 2004-2021 Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. | ALMANCAX
GERMANCAX YEMAHARA: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu